आजको राशिफल : आइतबार कुन राशिका लागि कस्तो छ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : आइतबार कुन राशिका लागि कस्तो छ ?
Khabar house | ३ श्रावण २०७८, आईतवार ०२:४६ | Comments
काठमाडौं : वि.सं.२०७८ साल साउन ०३ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०२१ जुलाई १८ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । दक्षिणा यन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४२ । आषाढ शुक्लपक्ष । तिथि– नवमी,बेलुकी ०९ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त दशमी । नक्षत्र–स्वाती, बेलुकी १० बजेर २३ मिनेट उप्रान्त विशाखा । योग– साध्य, रातको १२ बजेर ०४ मिनेट उप्रान्त शुभ । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर २० मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ५८ मिनेट । दिनमान ३४ घडी ०६ पला ।
मेष राशि : दा’म्पत्य जीवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दै दैनिकी सुखद तथा सम्बद्ध बनाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिएपनि उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल रहने हुँदा शरिरमा एक किसिमको जोस जागर आउनेछ । माया प्रे’ममा नजिकिने समय रहेकोछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
वृष राशि : पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई हराउँदै नतिजा तपार्ईँ आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । स’त्रु परा’स्त हुनेछन् भने तपार्ईँको खैरो खन्नेहरू आफै साइड लाग्नेछन् । वि’वादित विषयहरुको निर्णय तपार्ईँ आफ्नै पक्षमा आउने हुनाले खुसीले उचाई नाघ्नेछ । पुराना सापटी तथा लेनदेनका मु’द्दाहरु सल्टाउन सकिने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया गरेको मानिसबाट उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ ।
मिथुन राशि : अध्ययनमा मन जाने तथा ध्यान केन्द्रित हुनाले आफूले चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा गुरुजनहरुको सुझावलाई सिरोधार्य गर्दै अगाडी बढ्न सकिनेछ। मन परेको मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सम्पती पाउने योग रहेकोछ भने प्रे’ममा सामि’प्यता वढेर जानेछ । सन्तान, छोराछोरी तथा आफन्तसँग रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
कर्कट राशि : राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्न हर कोशिश गर्दा गर्दै नसकिने हुँदा आलोच’नाको शि’कार हुने योग रहेकोछ । सामाजिक मान सम्मानमा आ’घात पुग्ने योग रहेकोछ । घर परिवारबाट टाडा हुनुपर्दा नरमाइलो लाग्नेछ । पढाइ लेखाइमा मन नजादा वा घर बस्न मन नलाग्दा अरु भन्दा पछि परिनेछ । आमा वा घर परिवारका आफूले मान्नु पर्ने मानिसहरुको सल्लाह तथा सुझाबलाई शि’रोधार्य गर्दै अगाडी बढ्नुहोला ।
सिंह राशि : पराक्रम बढेर जाने हुनाले जोसिलो काम गर्ने जागर आउनेछ । सानो प्रयत्‍नले राम्रो काम गरी फाइदा लीन सकिनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरु परा’स्त हुने छन् । दाजुभाई तथा छिमेकी हरु सँगको सम्वन्धमा सुधार भएर जानेछ । छोटो तथा रमाईलो यात्रा हुन सक्छ । उत्पादित उद्योगमा लगानी बढाई भने जस्तो रुपैया पैसा कमाउन सकिनेछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ । लेखन कला तथा साहित्य जस्ता क्षेत्रमा झुकाव बढ्नेछ ।
कन्या राशि : आफ्ना सम’स्याहरु परिवार तथा आफन्तले बुझ्ने हुदा काम गर्न सहज हुनेछ । थोरै बोलेर मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने बोलिको प्रभाव बढ्ने हुदा महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सकिने छ । माया प्रे’ममा विश्वास बढ्नेछ भने जीवन साथिको सहयोगले नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । बिद्यार्थीहरुले थोरै समय दिँदा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नेछन् ।
तुला राशि : पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ । माया प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवार तथा आफन्त बीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । सुन्दर तथा वि’लासी बस्तुहरु को प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ ।
वृश्चिक राशि : आफन्त तथा परिवारकै सदस्यहरुबाट सहयोग नपाइने हुँदा कामहरु थाति रहने छ । माया प्रे’ममा अरुकै नकारात्मक टिका टिप्पणीले मन मु’टाव बढ्ने योग रहेकोछ भने पति प’त्नी बीच अवि’स्वास बढ्ने योग रहेको छ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला समान्य स्वास्थ्य सम्ब’न्धी सम’स्या आउनेछ । छोटो दुरिको यात्राको तय हुनेछ ।
धनु राशि : पढाइ लेखाइमा राम्रो प्रगती गरी नाम कमाउन सकिनेछ भने बैकिङ क्षेत्रको लगानी बाट भनेजस्तो आम्दानी हुने छ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको प्रयोग तथा परिचालन मार्फत नयाँ काम गर्न सकिने छ । दाजु भाईको सहयोग हुने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रे’म तथा मित्रताको बन्धन क’सिलो भएर जानेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरि राम्रै आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
मकर राशि : पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा अग्र स्थानमा तपार्ईँको नाम आउनेछ । माया प्रे’मको गाठो कसिलो भएर जानेछ भने घर परिवार तथा आफन्तबाट भने जस्तो सहयोग पाइने छ । पै’त्रिक धन सम्पतिको प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाई वा लेखहरू जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
कुम्भ राशि : आफूले पाएको अधिकारलाई भरपूर प्रयोग गरी उपलव्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । आफ्नो सस्कार तथा रीतिरिवाजमा जोगाउन समय लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रे’म तथा मित्रताको ब’न्धन क’सिलो भएर जानेछ भने दा’म्पत्य जीवन खुसी रहनेछ ।
मीन राशि : माया प्रे’म तथा पति पत्नी बीच केही विषयमा मन मु’टाव बढ्नेछ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछि परेको भान हुनेछ । धनमाल हराउन तथा लु’टिन सक्छ सजक रहनुहोला। व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन बढि नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । कामका सवालमा उठ्ने गोप्य कुराहरु बाहिर आउन सक्ने हुनाले सजक रहनु पर्नेछ । दिदी बहिनीसँग मन मु’टाव बढ्नेछ भने समयमा काम नसकिने हुँदा मान’सिक चि’न्ता बुड्नेछ ।